Dugsiga Hoose - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
Dhisidda aasaaska guusha nolosha oo dhan
Degmada 196 waxay leedahay 14 dugsi hoose iyo shan dugsi hoose oo magnet ah oo u adeega carruurta xanaanada ilaa fasalka shanaad. Waxaan sidoo kale leenahay dugsiga waxbarashada gaarka ah ee K-12 ee ardayda naafo ka ah xagga shucuurta iyo dabeecadda ah (Dakota Ridge).
Dugsiga hoose wuxuu u yahay waqti xiise u leeyahay bartayaasha yaryar ee sahaminaya manhaj cusub ee dhisaya aqoontooda maadooyinka aasaasiga ah. Isla markaasna, macallimiintu waxay la shaqeynayaan ardayda si ay u koriyaan caqligooda bulsho-shucuureed. Aqoonyahanadan daryeelaya waxay u heellan yihiin inay ardayda siiyaan jawi waxbarasho oo taageero leh iyo soo jiidasho, khibrado waxbarasho oo hal abuur leh oo u oggolaanaya inay sahamiyaan xuduudaha dibadda ee awooddooda ballaaran.
Manhajka aasaasiga ah ee ardayda da'da dugsiga hoose wuxuu ku saleysan yahay heerarka gobolka Minnesota iyadoo diirada la saarayo xisaabta, sayniska, cilmiga bulshada, iyo farshaxanka-akhriska iyo qoraalka ee luqadda Ingiriisida. Manhajka farshaxanka luuqaddu wuxuu ka kooban yahay aagagga suugaanta, qoraallada macluumaadka, qorista, hadalka, daawashada, dhageysiga, aqoonta warbaahinta, iyo xirfadaha luuqadda. Cutubyada iskudhafan ee daraasadda waxay ka kooban yihiin unugyo suugaaneed iyo unugyo qoraal macluumaad ah.
Qaybaha suugaanta waxaa ka mid ah unug bulshada ka mid ah (kobcinta dabeecadda); qeybta qoraaga, iyo qeybta sawirada. Unugyada qoraalka macluumaadku waxay dhexgalaan akhriska aan aqoonta lahayn cilmiga sayniska iyo cilmiga bulshada, iyagoo ardayda u oggolaanaya inay sameeyaan cilmi baaris feker leh oo ay ku jiraan akhriska, qorista, iyo daabacaadda natiijooyinkooda.
Manhajka xisaabta wuxuu xooga saarayaa halbeegyada muhiimka ah ee gobolka ee saddexdii biloodba markay ardeydu u shaqeeyaan xagga hanashada. Manhajka loogu talagalay meelaha takhasuska leh ee ka baxsan fasalka muhiimka ah sidoo kale wuxuu la jaanqaadayaa heerarka gobolka iyo qaranka.
Eeg Khariidadda Dugsiga Hoose
Liiska dugsiyada hoose